Maria virjiny mandrakizay – 2trondro
Home / Fiangonana / Mary / Maria virjiny mandrakizay
Nahoana no ny Katolika mino foana i Maria virjiny, raha ny Baiboly dia milaza i Jesosy rahalahy sy anabavy?
Ary, nahoana no ho virijina Mary tena zava-dehibe amin'ny Katolika?
Ny kely saina valiny: Katolika mino virjiny foana i Maria nandritra ny androm-piainany, satria marina izany. Izany dia fampianarana mafy nanambara ny Fiangonan'i Kristy, “ny andry sy ny fototry ny fahamarinana” (Jereo Paoly Taratasy Voalohany ho An'i Timoty 3:15); nambara tamin'ny alalan'ny Masina Lovantsofina; ary amin'ny agreeance amin'ny Soratra Masina (Jereo Paoly Taratasy Faharoa ho an'ny Tesaloniana 2:15).
Noho izany, Katolika mino fa ny “rahalahy sy anabavy 'ny Tompo” voalaza ao amin'ny Baiboly dia akaiky-fifandraisana Jesosy, saingy tsy iray tam-po (rehefa Ho manazava amin'ny an-tsipiriany eto ambany).
Farany, ary tena be, Ny Fonds Maria virjiny dia tena ilaina ho Kristianina, noho ny zavatra dia manamafy momba an'i Jesosy. amin'ny farany, finoana izany dia manondro ny fahamasinana 'i Kristy sy ny maha-tokana ny ny Fahatongavana ho nofo: ny asa Andriamanitra lasa olombelona.
Ny mpaminany Ezekiela dia nanambara ny mpanjaka “hivoaka, ary rehefa lasa nivoaka ny vavahady dia harindrina” (jereo Ezekiela 46:12), ary ny Fiangonana mahafantatra izany ho momba ny nahaterahan'i Kristy sy Maria virjiny mandritra ny fiainana (jereo Saint Ambrose, Fanokanana ny Virjiny 8:52). Noho izany, dia mety ny i Maria no mitana ny virjiny taorian'ny nahaterahan'i Jesosy, noho ny hoe iza Izy: Andriamanitra in endrik'olombelona!
Soratra Masina, iray mba handinika momba ny tantaran'i Mosesy sy ilay voaroy nirehitra. Rehefa Mosesy nanatona ny kirihitra, ny Tompo hoe:, “Aza manakaiky; esory ny kapa amin'ny tongotrao, fa ny toerana izay ijoroanao dia tany masina” (Fifindra 3:5).
Ity tantara ity dia manampy antsika hahatakatra ny Fonds Maria virjiny tamin'ny fomba roa.
Voalohany, hitantsika fa ny tany dia nohamasinina noho ny fanatrehan'ny Tompo dia nidina tao. Tsy tokony hanadino fa Andriamanitra iray ihany, izay niseho tamin'i Mosesy teo amin'ny voaroy nirehitra, mbola torontoronina tao an-kibon'i Maria.
Noho izany, mety ihany ho miendrika ny milaza fa, tahaka izany tany masina amin'ny Fifindra, ilaina mba ho masina, manokana vonona, izany hoe, mba handray ny Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo.
Faharoa, ny Rain'ny Eglizy nahita ny endriky ny roimemy nirehitra mihitsy–amin'ny voaroy nirehitra, nefa tsy levona–ho toy ny fanoharana ny Maria hiteraka tsy forfeiting virijina azy. Ohatra, tamin'ny taonjato fahefatra, Gregory avy any Nysse nanoratra, “Inona no mifanitsy tamin'izany andro izany ao amin'ny lelafo ny roimemy, kanefa naseho ampahibemaso ao amin'ny zava-miafina ny amin'ny Virjiny. … Rehefa tao an-tendrombohitra ny nirehitra nefa tsy nahalevonana, toy izany ny Virjiny niteraka ny mazava, ary tsy simba” (Tamin'ny nahaterahan'i Kristy).
indrindra, Mary ny Fonds virjiny manambara amin'izao tontolo izao fa nisy izany, satria i Kristy masina–Andriamanitra Izao-mihitsy–mety ho tsy manara-penitra ho Azy mba efa niforona tao an-kibo ny vehivavy tsotra; ary, toy izany koa, fa ny mpanota ho tonga avy izany kibo rehefa Azy–am-bohoka manokana vonona ny hitondra ny Mesia. Indray, Diniho Ezekiel, “[Ary ny mpanjaka] hivoaka, ary rehefa lasa nivoaka ny vavahady no hirindrinany.”
Maria virjiny tamin'ny fotoana nahaterahan'i ny Tompo no asehon'ny mpaminany Isaia, izay milaza, “Indro, hanan'anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary hiantso ny anarany hataony hoe Imanoela” (7:14; jereo Matthew 1:23 ary Luke 1:27). Isaia, sady koa anie, manamafy ny virjiny in ny mamorona ary in-jaza. Koa. Mary ny valin-, ny Arkanjely ny fanambarana izy fa hanan'anaka ka hiteraka zazalahy–“Ahoana no hahatanteraka izany satria tsy fantatro ny olona?” (Luke 1:34)–mazava toa manondro fa virjiny izy. Ny fanehoan-kevitra sarotra ny dikany raha tsy izany.
Ny virjiny mandrakizay fanjakana no voafaoka ao amin'ilay Tonon-kiran'i Solomona, izay milaza, “Saha voahidy Anabaviko, ry ampakariko, loharano voaisy tombo-kase” (4:12).
Ahoana no tokony ho fahazoantsika izany nomena ny zava-misy fa izy sy i Josefa taty aoriana dia voafofo ho vadin'olona, ​​ary nanambady? Misy fomban-drazana fahiny izay mihazona fa Maria no natokana ho an'ny Tompo dia toy ny natokana ho virjiny mbola zazakely; ary rehefa tonga ny taona dia nankinina Joseph, ny maty vady be taona noho izy (cf. Protoevangelium Jakoba).
Ny foto-kevitra ny fahadiovam-pitondrantena ao anatin'ny fanambadiana eo ambanin'ny toe-javatra sasany dia, tokoa, ny foto-kevitra ara-baiboly. Ohatra, ao amin'ny Boky Voalohany ny Mpanjaka 1:4, I Davida Mpanjaka maka zazavavy, Abisaga, mba ho vadiny hikarakara azy rehefa antitra, fa hijanona tsy firaisana taminy.
Koa, ao amin'ny taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina, Nampirisika i Paoly ny toetry ny nohamasinina manambady na hanambady mandrakizay ho an'ireo izay afaka hanaiky izany (jereo 7:37-38).
Mazava, amin'ny fanazavana ny azy niantso mba hitondra ny Zanak 'Andriamanitra, Mary ny fanambadiana an'i Josefa dia lavitra avy amin'ny olon-tsotra. Izany dia natokan 'Andriamanitra noho ny fikarakarana sy ny fiarovana ny Virjiny sy ny Zanany–mba hitandrina ny Fahatongavana ho nofo miafina avy amin'izao tontolo izao nandritra ny fotoana kelikely. “Ny virjiny an'i Maria, ny miteraka, ary koa ny fahafatesan 'ny Tompo, dia niafina ny andrianan'izao tontolo izao,” Hoy i Ignace d'Antioche, mpianatr'i ny Apôstôly Jaona, in ny taona 107: “–telo zava-miafina mafy nanambara, fa niasa tao amin'ny fahanginan'ny Andriamanitra” (Taratasy ho an'ny Efesianina 19:1).
In Matthew 1:19, Soratra Masina dia milaza amintsika Jospeh “lehilahy marina.” Dia toy izany no, rehefa nandre Mary efa manan'anaka ny ankizy-kafa, dia tapa-kevitra ny hametraka azy moramora hamonjy azy amin'ny mety ho faty eo ambanin'ny Lalàn'i Mosesy (toy ny isan- Deuteronomy 22:23-24).
Niditra an-tsehatra ny Tompo, anefa, nilaza taminy tamin'ny alalan'ny anjely tao amin'ny nofy, “Aza matahotra ny hampakatra an'i Maria vadinao, fa izay zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina; izy dia hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany” (Matthew 1:20).
Joseph dia tsy mba nandray izany teny izany hoe, anefa, fa i Maria ho vadiny ao amin'ny tsotra heviny ny teny. Araka ny Saint Ambrose ny Milan nanoratra,
“Tsy no manao fahasamihafana fa hoy ny Soratra Masina: 'Joseph naka ny vadiny ary tonga tany Egypta’ (Matt. 1:24; 2:14); fa misy vehivavy nifanekena ho ny olona no nomena ny anaran'ny vadiny. Izany dia avy amin'ny fotoana izay ny fanambadiana ny mpivady dia manomboka fa voambolana no miasa. Tsy ny deflowering ho virijina izay mahatonga ny fanambadiana, fa ny mpivady fifanarahana. Izany dia rehefa ny tovovavy manaiky ny zioga izay manomboka ny fanambadiana, tsy rehefa tonga ny hahafantatra ny vadiny ara-batana” (Ny fanokanana ny virjiny sy ny Fonds virjiny an'i Maria 6:41).
Fa niteraka ny Zanak'Andriamanitra tonga ny voalohany ny vady ny ny Fanahy Masina (isan- Luke 1:35); Ary Josefa dia voarara ambanin'ny Lalàna mba manana fifandraisana ara-panambadiana amin'ny vadiny ny iray hafa.
Ahoana ny amin'ireo “rahalahy sy anabavy 'ny Tompo?”
Voalohany, dia tokony ho marihana fa misy loza eo amin'ny andininy avy amin'ny Soratra Masina naka teny avy tao amin'ny tontolon-kevitry ny rehetra ao amin'ny Soratra Masina. Ny zava-misy i Jesosy nametrahan'Andriamanitra Maria ho any amin'ny Apostoly Jaona, ohatra, dia mafy famantarana Tsy manana mpiray tam-po tena (jereo John 19:27). Fa raha nanan-janaka hafa i Maria, I Jesosy dia tsy maintsy nanontany olona ivelan'ny fianakaviana mba hikarakara azy. (Ny tohan-kevitra hanohitra izany nahazo vahana ny sasany amin'ny Evanjelika faribolana dia ny fiheverana izay nankinin'i Jesosy an'i Maria tamin'i Jaona, satria Jakoba sy ny hafa ny Tompo “rahalahy” tsy mbola Kristianina. Fa izao tohan-kevitra dia tenuous. Raha izany no raharaha, hisy hanantena ny Filazantsara mba hanome fanazavana sasany ny vokatry ity. Ny zava-misy i Jesosy nanome an'i Maria tamin'i Jaona tsy misy fanazavana mampiseho Mary tsy nanan-janaka hafa.)
Ahoana, avy eo, no mba manazava andininy toy ny Matthew 13:55, izay olona eo amin'ny vahoaka fanamarihana, “Tsy ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria fantatra ho ny reniny sy Jakoba, Joseph, Simona ary Jodasy rahalahiny? Tsy ny anabaviny ny mpiara-monina?”
Ny Katolika toerana fa ireo “rahalahy” ary “rahavavy” ireo havana akaiky, toy ny havany, saingy tsy iray tam-po, mifanaraka amin'ny Jiosy fahiny fanaon'ny miantso ny havana mahavotra iray “rahalahy” (isan- Genesisy 13:8; 14:14; 29:15, et al.). Araka ny Papa John Paul Lehibe nanoratra, “Tokony ho nahatsiaro fa tsy misy teny manokana misy ao amin'ny hebreo sy aramianina mba hanehoana ny teny hoe 'mpiray tam-po', ary ny teny hoe 'rahalahy’ ary 'anabavy’ noho izany dia ahitana ambaratonga maromaro ny fifandraisana.”1
Koa, izany any an-kafa nambara ao amin'ny Matthew fa “Jakoba sy Josefa” raha ny marina ireo zanaky ny hafa Mary, izay nitsangana teo nitondra ny sisa amin'ny vehivavy teo am-pototry ny hazo fijaliana, ary niaraka Maria Magdalena hankany amin'ny fasana tamin'ny marainan'ny Paska (27:55-56; 28:1).
Io Maria anankiray dia matetika heverina ho ny vadin'i Klopa, izay mety ho ny rahalahin-drain'i Jesosy (jereo John 19:25; jereo ihany koa ny Eusèbe, History of the Church 3:11).2 Izany dia milaza, koa, fa ny Tompo “rahalahy” na aiza na aiza ao amin'ny Soratra Masina dia antsoina hoe zanak'i Maria, araka ny Matetika i Jesosy no Antsoina hoe (jereo Matthew 13:55; Mark 6:3, et al.).
Misy andininy roa Filazantsara hafa fa ny mpanohitra Maria virjiny ny Fonds matetika no mitanisa: Matthew 1:25 ary Luke 2:7.
Matthew 1:25 fa Joseph “dia tsy firaisana aminy amin'ny fotoana rehetra talohan'ny niteraka zazalahy.” Araka ny Ott Ludwig hazavaina ao Fototry ny foto-pinoana Katolika, anefa, ity andininy “milaza(s) fa niakatra ho any amin'ny teboka voafaritra ara-potoana ny fanambadiana tsy lany, fa tsy misy fomba dia nisy lany rehefa afaka izany” (Tan Books, 1960, t. 207). Ny tanjon'ny Matthew 1:25 dia ny manamafy fa i Jesosy teto an-tany dia tsy nanana ray, ary marina tokoa ny Zanak'Andriamanitra. Tsy natao hilaza na inona na inona momba an'i Josefa sy Maria i Jesosy ny fifandraisana’ teraka. Diniho ny Faharoa Bokin'i Samuel 6:23, izay milaza fa Maria “nanan-janaka intsony mandra-pahafatiny.” Mazava ho azy, Tsy midika izany dia nanana zaza rehefa -pahafatiny. In Matthew 28:20, Mampanantena i Jesosy mba hiaraka ny mpanara- “-pamaranana ny taona.” Indray, tsy midika hitsahatra izy mba hiaraka aminy any an-dafin'i izany teboka.
In Luke 2:7, Jesosy dia antsoina hoe Maria “lahimatoa.” Na izany aza, araka ny Papa John Paul Nanazava:
“Ny teny hoe 'lahimatoa,’ ara-bakiteny dia midika hoe 'ny ankizy tsy ialohavan'ny hafa’ ary, fotsiny, mahatonga ny tsy firesahana momba ny fisian'ny ankizy hafa. Koa, ny Evanjelistra dia manamafy io toetra ny Ankizy, satria nisy adidy araka ny tokony ho lalàna jiosy dia mifandray amin'ny fahaterahan'ny ny lahimatoa, miankina ny na ny reny mety no niteraka ankizy hafa. Noho izany rehetra lahitokana dia ambany izany levitra satria 'niteraka aloha’ (cf. Luke 2:23)” (“Maneho ny Fiangonana an'i Maria ho 'Ever Virgin'”)
Michael O'Carroll, koa, tatitra, “Ny Jiosy soratra fandevenana tany Ejipta, niaraka tamin'ny taonjato voalohany, … Manampy hamaly ny fanoherana an'i Maria virjiny mandrakizay miorina amin'ny St. Lioka ny fampiasana ny teny hoe 'lahimatoa’ (prototokos) (2:7). Fa ny teny dia tsy midika ankizy hafa no asehon'ny ny ampiasaina amin'ny tranga ity mba hilazana ny vehivavy izay maty taorian'ny nahaterahan'ny zanany voalohany ankizy, mazava ho azy fa izay tsy afaka efa hafa” (Theotokos: A Teolojikan'ny Rakipahalalana Momba ny Virjiny Mary, Michael Glazier, 1982, t. 49).
Inona no Rain'ny Eglizy Lazao?
Koa satria andaniny roa ao amin'ny fifandirana noho ny Fonds Maria virjiny, mpomba sy amin'ny, manao ara-tsoratra masina hevitra mba hanohanana ny toerana, Ahoana no mba hamaritra hoe iza marina? Iza no fandikana ny Soratra Masina araka ny tokony ho, ao amin'ny authentically fomba maha-apôstôly?
Ny fomba iray mba hanome fanohanana dia ny hanontany ny Fivavahana Kristianina fahiny asa soratra ara-tantara, matetika fantatra amin'ny anarana hoe ny asa soratry ny Rain'ny Eglizy fa.
Clément avy any Aleksandria, ohatra, teo am-piandohan'ny taonjato fahatelo nanoratra, “Izany Neny irery no tsy ronono, satria izy ihany no tsy mba ho vadin'ny. Izy roa niaraka tamin'izay Virjiny sy Neny” (Ny Mpampianatra ny Ankizy 1:6:42:1).
Clément ny mpianatra, loharano, amin'ny folo taona voalohany izany tamin'ny taonjato, nanamafy fa Mary “tsy nanan-lahy hafa fa i Jesosy” (Fanehoan-kevitra ao amin'ny Jaona 1:6). any an-kafa, izy nanoratra, “Ary heveriko fa mifanaraka amin'ny antony fa i Jesosy no voalohany-vokatry eo amin'ny olona ny fahadiovana izay mifototra amin'ny fahadiovam-pitiavana, ary i Maria amin'ny vehivavy; fa tsy mpivavaka be ny Manomeza ho hafa noho ny azy ny voaloham-vokatry ny virijina” (Fanehoan-kevitra ao amin'ny Matio 2:17).
Miaraka amin'ny hafahafa fiderana azy, Athanase (D. 373) Nilaza Mary ho “Ever-Virgin” (Lahateny Manohitra ny Arians 2:70).
In about 375, Epiphanius niady hevitra, “Nisy ve na iza na iza na fiompiana izay sahy miteny ny anaran'i Masina Maria, ary rehefa nametra-panontaniana, Tsy avy hatrany hametraka, 'Ny Virjiny?'” (Panarion 78:6).
“Azo antoka,” Nanoratra Pope Siricius in 392, “tsy azontsika lavina fa tanteraka ny Fanehoana Fanajana dia nohamarinina tamin'ny noteneniny mafy ny isa Maria ny ankizy, ary mba nanana antony tsara mba ho nihoron-koditra amin'ny eritreritra fa teraka iray hafa mba hamoaka avy amin'ny iray ihany kibo virjiny izay an'i Kristy dia teraka araka ny nofo” (Taratasy ho Anysius, Bishop avy any Tesalonika).
Ambroise naneho hevitra in 396, “Tahafo azy, masina reny, izay ao aminy ihany ry malala Zanaka aseho lehibe toy izany ohatra amin'ny hatsaran-toetra ara-nofo; fa tsy ianao mamy ankizy, sady tsy ny Virjiny mitady ny fampiononana ny ho afaka hiteraka zazalahy iray” (taratasy 63:111).
Augustin avy any Hippone (D. 430) nanamarika, “A Virgin anaka, ny Virgin vokany, ny Virgin bevohoka, ny Virjiny mahavokatra, ny Virjiny mandrakizay. Nahoana no manontany tena amin'izao, O olona? Tsy miendrika ho an'Andriamanitra mba ho teraka toy izany, rehefa deigned mba ho lasa olona” (toriteny 186:1).
Papa Léon Lehibe nanambara in 449, “Tsy mbola torontoronina ny Fanahy Masina ao am-bohoka ny ny Virjiny Reny. Izy nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny very ny virijina, tahaka nanan'anaka Azy tsy misy ny very” (Ho ahy 28). Any an-kafa ny eveka ambony indrindra nanoratra, “Fa ny Virgin nanan'anaka, ny Virjiny niteraka, ary ny Virjiny foana izy” (Toriteny teo amin'ny andro firavoravoana ny nahaterahan'i Jesosy 22:2).
Dia toy izany no, no mahita ny tantara fitohizan'ny izany fampianarana avy tany am-piandohan'ny taona ny finoana nidina ho any amin'izao fotoana izao.
Jereo “Maneho ny Fiangonana an'i Maria toy ny 'Ever Virgin;'” L'Osservatore Romano, Edition isan-kerinandro amin'ny teny anglisy, Septambra 4, 1996. ↩
“Ny tohan-kevitra hanohitra izany, anefa,” nandinika Karl Keating, “dia ny hoe Jakoba dia any an-kafa (Mt 10:3) Voalaza, zanak'i Alfeo, izay midika fa Mary, na iza na iza izy, dia ny vadin'i Klopa ary samy Alfeo. Iray vahaolana dia ny hoe maty vady izy indray mandeha, dia nanambady. More angamba Alfeo sy Klopa (Klopa amin'ny teny grika) dia olona iray ihany, satria ny teny aramianina anarany Alfeo azo adika amin'ny teny grika amin'ny fomba samihafa, na araka ny Alfeo na Klopa. Na hoe dia hoe Alfeo naka ny anarana grika toy izany koa ny Jiosy anarana, ny fomba izay Saoly naka ny anarana Paul” (Fivavahana Katolika sy Fundamentalism, Ignatius Press, 1988, t. 288). ↩